NLD YOUTH LA MALAYSIA: July 2012
နောက်ကြည့်မှန် ပိတ်ကားပေါ် ရောက်မလားနဲ့ အနုပညာ-နိုင်ငံရေး အဆက်အစပ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ “နောက်ကြည့်မှန်” လုံးချင်းဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားကြမယ် ဆိုပေမယ့် လက်ရှိ အနေအထားအရ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ မှေးမှိန်နေဆဲဖြစ်လို့ ဖန်တီးဖို့ မလွယ်ကူနိုင်သေးဘူးလို့ ဦးမင်းကိုနိုင်က ဆိုပါတယ်။
“မလွယ်ဘူး။ မလွယ်သေးမှန်းလည်း ဒါရိုက်တာတွေ ကိုယ်တိုင် သိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခင်းအကျင်းတွေ၊ ဥပမာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မပါဘဲ မရဘူး။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ရိုက်ရဖို့ အခွင့်အရေးကိုက မလွယ်သေးဘူး။ သူတို့က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံး ဦးစားပေးပြီးတော့ ၀ယ်တယ် ဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသား တန်ဖိုး ထားတာ၊ ဂုဏ်ယူတာ။ ဒါပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ အများကြီး လိုသေးတယ်” လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီးမယ့် သူတွေက ဖန်တီးဖို့ ပြင်ဆင်နေပေမယ့် ဖန်တီးခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် တွေက ပေးမပေး ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေတာပါ။
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တဦး ဖန်တီးလိုက်တဲ့ “နောက်ကြည့်မှန်” ဟာ လှပတဲ့ အချစ်ဝတ္ထု တပုဒ်လို့ ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံရေး အငွေ့အသက်တွေ၊ ၈၈ အရေးအခင်း ပုံရိပ်တွေ ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။ ဒီဝတ္ထုထဲက အဓိက ဇာတ်ကောင် ကိုဖေသောင်း ဆိုတာကလည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတဦး မဟုတ်လား။
သိပ် ဝေးဝေး ကြည့်နေစရာ မလိုပါဘူး။ မကြာသေးခင်က ဇူလိုင် ၇ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ဗုံးခွဲဖျက်ဆီး ခံရတဲ့ နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပွဲတွေ ပြုလုပ်ဖို့တောင် တားမြစ်ပိတ်ပင် ခံနေရတာ ဆိုတော့ ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံတွေကို ပြန် အသက်သွင်းကြမယ့် ကိစ္စကို လက်မခံနိုင်တာ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အရိပ် ကိုယ်ပြန် လန့်နေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာမို့ မစပ်စုလည်း ထူးပြီး မအံ့သြတော့ပါဘူး။
နောက်တခု ဖြစ်နိုင်တာကတော့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်းဟောင်း အတိုင်း ဖန်တီးနေတဲ့၊ ရိုက်ကူးနေတဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်သလောက် ဖန်တီး၊ ရိုက်ကူး ဘာမှ ၀င်မပြောဘဲနဲ့ အားလုံး ပြီးတော့မှ ငါတို့ ဖြတ်ချင်ရာတွေ ဖြတ်ထုတ်မယ် ဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ ပစ္စည်းလေးလည်း အမြီးဖြတ်၊ ခေါင်းဖြတ်၊ ခြေဖြတ်၊ လက်ဖြတ်နဲ့ အင်္ဂါမစုံတော့ရင် ဖန်တီးသူတွေ ဝမ်းနည်းကြရဦးမယ်။
ဒီလို အတွေ့အကြုံကို ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်ရဲ့ ၈၈ အရေးတော်ပုံ နောက်ခံပြု ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “လွမ်းစိမ့်” ဇာတ်ကား ကိုကြည့်ရင် သိနိုင်မှာပါ။ လုံးဝ ပြသခွင့် မပြုထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို တလောက ပြန်လည် ပြသခွင့် ပြုလိုက်ပါတယ် တဲ့။ ဒါပေမယ့်ဟိုဖြတ်၊ ဒီဖြတ်နဲ့ “လွမ်းစိမ့်” အင်္ဂါမစုံဘဲ ထွက်လာရတာပါ။
ဒီ နောက်ကြည့်မှန် လုံးချင်းဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ၀င်းထွန်းထွန်းက ၀ယ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်ကို လက်ဆောင်ပေး ရိုက်ကူးစေမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းကိုတော့ အကယ်ဒမီ မြင့်ဦးဦးမြင့်က ခွဲပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဒီလို ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်လို့ ထင်ကို မထင်ထားဘူး။ ဖန်တီးတုန်းကလည်း စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရေးလိုက်တာ။ ဒီလိုမျိုး ရည်ရွယ်ပြီးတော့လည်း တခါမှ စိတ်မကူးခဲ့ဖူးဘူး။ သူတို့က အဲဒီလို ပြောလာတော့ နည်းနည်း ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားတာပေ့ါ။ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တော့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ သူတို့ဝယ်မှာ မဟုတ်ဘူးပေ့ါလေ” လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်၊ ပြသခွင့် ရတာ မရတာ ထားဦး၊ အခုလို လုံးချင်း ၀တ္ထုကို တရားဝင် ထုတ်ဝေခွင့် ရလာတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီဝတ္ထုကို ပထမဆုံး ထုတ်ဝေတာက ကိုမင်းကိုနိုင် အကျဉ်းထောင်ထဲ ရှိနေစဉ်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ပြည်ပ အဖြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) ကနေ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ ထုတ်ခဲ့တာကိုး။ အဲဒီအချိန်က နအဖ အစိုးရ အလိုအရ ဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်ဟာ တရားမဝင် စာအုပ်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ပြည်တွင်းမှာ ဒီစာအုပ် လက်ဝယ်ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေ့ရင်တောင် ဖမ်းလို့ရတာကိုးလေ။ အခုလို တရားဝင် ထုတ်ခွင့် ပေးတယ် ဆိုတော့လည်း အစိုးရရဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြင်ရတယ်လို့ ပြောရ လေမလားဘဲ။
၀တ္ထု ဖန်တီးရှင်ကတော့ “ဘယ်သူမဆို ရှေ့မှာ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ပြီးသွားရင် နောက်မှာ ဘာဖြစ်ကျန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြန်ကြည့်ဖို့ နောက်ကြည့်မှန် တချပ် ဆောင်ထားကြပါလို့” တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။ မစပ်စုကတော့ အရင် နအဖ ခေတ်က လက်ကျန် စိစစ်ရေးဌာနကြီးနဲ့ တကွ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို နောက်ကြည့်မှန်တချပ်လောက် ဆောင်ထားပါလားလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ နောက်မှာ ဘာလာမယ် သိရအောင်လို့ပါ။
“အရင်ကဆို နိုင်ငံရေးသမားလို့ နာမည်တပ် ခံရရင်၊ နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့တယ် ဆိုရင် အဖတ် မလုပ်ချင်ကြဘူး။နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်ထဲက ထွက်လာတဲ့သူကိုဆို အနူလို အဝဲလို ထင်ကြတယ်။ မထိချင်ကြဘူး” လို့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တဦးဖြစ်ခဲ့သူ နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ဇာဂနာက ကမာရွတ်မြို့နယ် ပရဟိတ လူငယ်များ စာပေဟောပြောပွဲ တခုမှာ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီစကားကို ဂီတအနုပညာရှင်တွေက ချေဖျက်လိုက်ပုံပါပဲ။ အခုတော့ နိုင်ငံရေး သမားတွေကို အဖတ်လုပ်ချင်၊ ခေါ်ချင် ပြောချင် လာကြပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့ကပဲ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေကို ဂီတ အနုပညာရှင်တွေက Mr.Guitar စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
“တချို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေကို မသိသေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့ မိတ်ဆက်တယ်။ သူတို့ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လို အားယူခဲ့ရတယ်၊ သီချင်းလေး တပိုဒ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တကြောင်းပဲ
ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုနှိုးဆော် ပေးခဲ့တယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကလည်း အနုပညာနဲ့ မစိမ်းဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေ့ါ။ ဘယ်နေရာမဆို သီဆိုလို့ရမယ့် သီချင်းလေး တပုဒ်ကို အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး လုပ်ရင် မရနိုင်ဘူးလား ဆိုတာလေးတွေ အိုင်ဒီယာ ပေးကြပါတယ်” လို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သူ အဆိုတော် သံသာဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အခုလို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေ တွေ့ဆုံမှုဟာ ဒါပထမဆုံး အကြိမ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဒီမတိုင်ခင်ကလည်း ဂီတ ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်တွေဟာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ခြေချင်းလိမ်နေကြလို့ “ခြံရှေ့ကနေ ထောက်လှမ်းရေး နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ ၀ိုင်းဖမ်းခိုင်းမှပဲ မလာရဲတော့မှာ” ဆိုပြီး လူရွှင်တော် ဇာဂနာကတောင် ပြက်လုံး ထုတ်ခဲ့ဖူး ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂီတအနုပညာရှင် တွေဟာ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့မှာလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ အာဇာနည် ဗိမာန်မှာ အတူသွားရောက် ဂါရ၀ ပြုကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပါဝင်ကူညီလာကြတာဆိုရင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်လို့ သံသာဝင်းက ဆိုပါတယ်။
“ဘယ်အပိုင်းကဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အနုပညာနဲ့ တကယ် ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အဲဒီလို များများစားစား ပါဝင်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်း ထင်တယ်။ အနုပညာသမား ဆိုတာ ပရိသတ်ကို အများဆုံး ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ ဘက်ကနေ ရပ်တည်နိုင်ကြဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်တဲ့နေရာမှာ တကယ့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ လုပ်ဖို့လည်း လိုတာပေ့ါနော်။ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားမှုအတွက် လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်တကယ် ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပါဝင်ကြတာကိုပဲ လိုလားပါတယ်။ ကျမတို့လည်း အဲဒီစိတ်နဲ့ သွားနေကြတာပါ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှား လာနိုင်ပါစေလို့ မစပ်စုလည်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:57 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေဟာ တပ်မတော်ရဲ့ တရားဝင် စာရင်းတင်သူ ဟုတ်ရဲ့လား?
ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ
တပ်မတော်မှာ ကစထမှူးအဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း မြင့်ဆွေကို ဒုတိယသမ္မတ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ငြင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက ဝေဖန်ချက်ပေးကြရာ အခြေခံဥပဒေအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ မကိုက်ညီကြောင်းအပြင် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တစိတ်တဒေသ အကြောင်း အရာတွေကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ ဦးမြင့်ဆွေဟာ D.S.A (15) ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး တပ်ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က ကက(ကြည်း) (စစ်ဆင်ရေး) တွင်သာ ဖင်ဂျိုးကပ်အောင် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဦးစီးမှူး (တတိယတန်း) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ရှေ့တန်းသို့ (ဒုတပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ရင်းမှူး) အဆင့်ဖြင့် ခေတ္တခဏသာ ဆင်းခဲ့ရပြီး စစ်ရုံးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကာ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကို လုံးဝမဆင်းရတော့ဘဲ (ဒုဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်) စသည့် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ကို စစ်ရုံးမှာပင် တောက်လျှောက်ရယူသွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ရှေ့တန်းအတွေ့အကြုံ (Field Services) နည်းပါးသူဖြစ်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ (Commanding Officer) ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက ဆိုပါတယ်။ အလားတူ ယခင်က စည်လုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တနေရာတွင် ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အရ သူဟာ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်တုန်းက သံဃာ့အရေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဂရမ် ထုတ်ပေးရေးကိစ္စတွေမှာ တချို့ကို လျောလျောရူရူ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့် လှည်းကူးမြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းရဲ့ မြေဂရမ် ထုတ်ပေးရေး ကိစ္စမှာတော့ ခွင့်မပြုဘဲ အကြောင်းပြချက် မရှိ ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြန်လို့ အဲ့ဒီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က သူ့ကို စိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်လို့ မိန့်ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ခင်သက်ဌေးဟာလည်း ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို အမျိုးစပ်ပြီးတော့ အမျိုးတော်သူနဲ့ အဖားတော်သူ စာရင်းဝင်ဖြစ်အောင် အစွမ်းကုန် လုံးပန်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ သာမညဘုရားဖူး ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ ဦးမြင့်ဆွေရဲ့ဇနီး ဒေါ်ခင်သက်ဌေးဟာ သူမတစ်ဦးတည်း ဦးဆောင်စီမံခွင့်ရပြီး အဲဒီခရီးစဉ်မှာ ထိုစဉ်က အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကက်စိန်ရဲ့ဇနီးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတဲ့အထိ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အား ဒေါ်ခင်သက်ဌေးက စီစဉ်ရင်း အစွမ်းကုန်ဖားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးသန်းရွှေအကြိုက် ဦးမြင့်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆက်လက်တင်ပြရရင် ဦးမြင့်ဆွေဟာ မနာလိုဝန်တိုစိတ် ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူစစ်ရုံးမှာ နေခဲ့စဉ်က သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် O.T.S (49) အပတ်စဉ်ကျောင်းဆင်း လူတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းမြင့်ကို (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး မြေပုံအား ရုတ်တရက် တင်ခိုင်းခြင်းဖြင့် ပညာပေး နှိပ်ကွပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ဝင် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့တပည့်) များကို နှိပ်ကွပ်ရာမှာ လူကြီးတွေရဲ့ဒေါသကို အကွက်ရရင် ပင့်ပေးတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကာလ ဖြစ်စဉ်တွင် စောစောပိုင်းမှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း (ယခု ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး) အား ကစထမှူး ဖြစ်နေတဲ့ ဦးမြင့်ဆွေက ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက ဆိုပါတယ်။ သူဟာ နိုင်ငံရေး လောက ကြံ့ဖွံ့ပါတီသို့ ဝင်ရောက်နေစဉ် ထိုစဉ်က ကစထမှူးဟောင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ငွေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းသန်းတို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုကို ကြည့်မရ၊ မနာလို မရှု့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရကတ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ သူတို့အား နှိပ်ကွပ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကစထ (၅) မှူး ရာထူးကို စတင်ယူချိန်မှာ ဇနီးဒေါ်ခင်သက်ဌေးက အိမ်တော်ကြီးသို့ သွားရောက်ပြီး လင်တော်မောင် အနေနဲ့ ဒီရာထူးထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဒုတပ်ချုပ်လို နေရာမျိုး မရလို့ နားပူနားဆာ ဂျီကျခဲ့ရာ ဦးသန်းရွှေတို့က နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အချိန်တန်တော့ နေရာရမှာမို့ အစီအစဉ် ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ သည်းခံစောင့်ခိုင်းကြောင်းလည်း ပြောဆိုတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိတ်ကားမှာ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရာ အချိန်တန်တော့ ရကတဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာကာ ယခုတဖန် ဒုသမ္မတအဖြစ် သူ့အား အမည်စာရင်း တင်ခဲ့ကြရာမှာ ဦးသန်းရွှေရဲ့ ဖိအားပေးမှု မကင်းကြောင်း စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနှင့် အိန္ဒိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး V.K. Singh တို့ နယူးဒေလီတွင် တွေ့ဆုံစဉ်
တကယ်တော့ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က စစ်တပ်မှာ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အထက် တစ်ဦးဦးကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပန်းစားသူကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သဘောကျနေတဲ့ ညှိုနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ စစ်ဆင်ရေးမှာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် စစ်ဦးစီးမှူး (တတိယတန်း) စစ်ဆင်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ဦးသိန်းစိန်က စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) အဖြစ် အတူလက်တွဲခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမြင့်ဆွေကို ကြားဖြတ်တင်လိုက်ရတာတော့ တပ်မတော်သားအများစုက ဘဝင်မကျ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒုသမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးဟာ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ် တပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပြီးမှ နယ်ဘက် ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးမြင့်ဆွေကျတော့ အရေခွံချွတ် နယ်ဘက်မှာ (၁) နှစ် သက်တမ်း ပြည့်ကာနီးမှ စစ်တပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့မှုအပေါ် သဘာဝမကျကြောင်း စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဦးမြင့်ဆွေသာ ဒုသမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် ရင်လေးဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သာ အသိဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org မှတဆင့် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:34 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒဏ်ခတ်မှုရုပ်သိမ်းရေး ပြုပြင်ရေးအပေါ် မူတည်
Derek Mitchell in press release
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို နောက်ထပ် သုံးနှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ အမေရိကန်က ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ချက်ခြင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်သစ် ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါ တယ်။ ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန်သံရုံးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်သစ် ဒဲရက်ခ်၊ မစ်ချယ်က ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းကိုတော့ ရန်ကုန်အခြေစိုက်၊ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ကိုရဲကျော်အောင်က သတင်းပို့ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို နောက်ထပ် သုံးနှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်အပြီး မြန်မာနိုင် ငံမှာ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရက်ခ်မစ်ချယ်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဒီမို ကရေစီ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီး အမေရိကန်က ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူ မှုတွေကို ချက်ခြင်းဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သွင်းကုန်များ တားမြစ်မှုတွေကို ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အမရိကန် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သမ္မတဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီး ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေလျော့ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့ သူက အခုလို ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
“ကျနော်တို့အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့လည်း လွှတ်တော်ကို တင်ပြလာတဲ့ Sanction ကို ရုပ်သိမ်းဖို့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ကာလက တိုးတက်မှုတွေကို အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြခဲ့လို့ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရောက်ရှိလာသလို သံအမတ်ကြီး အဆင့် ပြန်လည်ထားရှိခဲ့ တာတွေလည်း ဖြစ်လာတာပါ။”
ကုန်သွယ်ရေးတားမြစ်မှု ဥပဒေကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စတင်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လကုန်အတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာမို့ သက်တမ်းတိုးဖို့ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်က လုပ်ဆောင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေမှာ ကုန်သွယ်ရေးတားမြစ်မှုကို အိမ်ဖြူတော်က သက်ညှာလျှော့ပေါ့ခွင့်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့အပေါ် သူက အခုလို ပြောပြသွားခဲ့တာပါ။ မကြာသေးခင်က အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရက်ခ်၊ အိုဘားမားက အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ မြန် မာနိုင်ငံမှာ ရင်းးနှီး မြှုပ်နှံနိင်ကြပြီလို့ ပြောကြားခဲတာကြောင့် အမေရိကန် ကော်ပိုရိတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မကြာမီ လာရောက်ရင်းနှီးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ ပွင့်လင်းမှုတွေဟာ သယံဇာတလုပ်ငန်းတွေမှာ အလွန်အရေးကြီးတယ် လို့လည်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
“တိုင်းပြည်ထဲစီးဝင်လာတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကို အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ကြည့်နိုင်ရေးအတွက် ဒီသတင်း အချက်အလက်တွေက အထောက် အကူဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ စီးပွားရေးပွင့်လင်းမှုက သယံဇာတ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ငွေပမာဏ ကြီးမားပြီး မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းလို နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက နိုင်ငံတော် ရဲ့ အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတတွေကို စီမံခန့်ခွဲကြရ တာဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် MOGE လို နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်မယ့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အထူး လိုအပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့ဘက်က သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာသာမက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်တွေမှာလည်း လေးလေးနက်နက် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သူက ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ USAID အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်လည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သန်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ဒီကနေ့မှာတော့ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရတဲ့ ပြည် သူတွေအတွက် ဒေါ်လာ သုံးသန်းဖိုး စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီပေးမယ့် အကြောင်းကို ကြေညာလို ပါတယ်။ USAID ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာရုံးကနေတဆင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် ကို ကျနော်တို့ ဒေါ်လာ သုံးသန်း လှူဒါန်းလိုက်တာပါ။ ဒီလှူဒါန်းငွေနဲ့ WFP က ဆန် မက်ထရစ် တန်ချိန် ၃,၄၀၀ ဖိုးလောက် ဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ လူ ၅,၅၀၀ အတွက် ၆ လစာ အကူအညီဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒီဆန်တွေကို ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက အစိုးရထိန်းချုပ်ထား ရာ ဒေသတွေမှာရော အစိုးရထိန်းချုပ်မှု မရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာပါရှိနေကြတဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး လာရတဲ့သူတွေကို WFP က ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ အမေရိကန်သံရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာ ဒဲရက်မစ်ချယ် ရဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပြီး အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ရေးတွေမှာ
US-AID က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရက်ခ်၊ မစ်ချယ်က ကတိပြုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:17 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ရုပ်ပုံပေါ် ကလစ်နှိပ်၍ အကြီးကြည့်နိုင်ပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 2:49 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
သတိပေး တိုက်တွန်း နိူးဆော်ချက်
National League for Democracy Facebook
Share Or Save & Subscribe Posts
လ အလိုက် မှတ်တမ်း
အမေရိကန် ဒိုင်ယာရီ အပိုင်း (၄)
၄ ရက် ၁၁ လ ၂၀၁၀ မှစတင်ရေတွက်ပါသည်
မြန်မာ မလေး စံတော်ချိန်
သတင်းဌာနများ ခေတ်ပြိုင် ဧရာဝတီ ဟစ်တိုင် မိုးမခ ဘီဘီစီ နိရဉ္စရာ နေ့သစ် ရိုးမ၃ မဇ္ဈိမ ဗီအိုအေ ဒီဗွီဘီ မိုးသောက်ကြယ် ယနေ့မြန်မာ လူထုအသံ ဟစ်တိုင် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သံလွင်အိမ်မက် အာအက်ဖ်အေ မွန်သတင်း သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်